Ciidamada Al-Shabaab Oo Cagta Mariyey Kolonyo Ciidamo Burundi Ah Oo Ku Safrayay Duleedka Balcad.
Saturday July 27, 2019 - 14:00:43 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka naga soo gaaraya gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in maanta ciidamada Xarakada Al-Shabaab ay weerar xooggan ku qaadeen Kolonyo ciidamo Burundi ah oo ku safrayay wadada u dhexaysa degmada Balcad iyo deegaanka Gololeey ee gobolka Sh/dhexe.
War kooban oo ka soo baxay taliska ciidanka Xarakada Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in Mujaahidiintu ay cagta mariyeen kolonyo ciidamo Burundeys ah oo dhaq dhaqaaqyo ka sameynayey halkaasi.
Ciidamada la weeraray ayaa la sheegay in halkaas ka wadeen howlgalo ay ku xaalufinayaan dhirta iyo dhul beeraadka ku yaalla halkaas si ay dhul banaan uga dhigaan goobaha ku xeeran saldhigyadooda.
Taliska Ciidanka Al Shabaab ayaa idaacada Andalus u sheegay in weerarkaas lagu gubay ugu yaraan saddex gaari ah oo ay ku jiraan gaadiid dagaal iyo baaldoozarro, halka sidoo kalena ay si dirqi ah ku baxsadeen gaadiid kale oo dhowr ah.
Saraakiil u hadlay Xarakada Al-Shabaab ayaa sidoo kale sheegay in weerarkaas lagu dilay ugu yaraan 10 askari oo Burundi ah kuwaas oo qaarkood looga cararay goobta lagu dagaalamay, iyadoo xoogagga Al Shabaab ay soo ganiimeysteen hub iyo rasaas fara badan oo uu cadowgu ka cararay.
Ciidamada ka badbaaday weerarka ayaa u kala firxaday jihooyin kala duwan, iyadoo qaar ka mid ah askarta ay dib ugu noqdeen saldhigooda oo aan sidaas uga fogeyn goobta lagu dagaalamay, halka kuwa kalena ay ku maqan yihiin deegaanada howdka ah halkaas oo ay ku sii baacsanayaan xoogagga Al Shabaab